Ihe mgbochi breeki dị ala
Kedu ihe bụ breeki pad shims?
site admin na 22-01-16
Ka ọ dị ugbu a, ma ọ bụ onye ahịa njedebe ma ọ bụ onye na-ekesa ngwaahịa breeki, ọ bụghị naanị na anyị na-agbaso njirimara nke breeki na-arụ ọrụ nke ọma, breeki dị mma, adịghị emerụ diski na enweghị ájá, ma anyị na-echekwa nchegbu dị elu banyere ya. nsogbu mkpọtụ breeki.qualit...
Ugboro ole ka a ga-eji dochie diski breeki?
Akpọrọ m onye ọrụ na-arụ ọrụ ọkachamara gbasara okwu a, ha gwara m na diski breeki na-adabara ka ịgbanwee otu ugboro n'ihe dị ka kilomita 70,000.Mgbe ị nụrụ ụda ọrịre na-akụpu ntị mgbe ị na-agba breeki, nke a bụ igwe oti mkpu na breeki ahụ amalitela iyi breeki dis...
Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ọnụọgụ ọnụọgụgụ breeki
Dị ka ọ na-adịkarị, ọnụọgụ esemokwu nke paịlị breeki nkịtị bụ ihe dịka 0.3 ruo 0.4, ebe ọnụọgụ mgbagha nke breeki na-arụ ọrụ dị elu bụ ihe dịka 0.4 ruo 0.5.Site na ọnụọgụ esemokwu dị elu, ị nwere ike iwepụta ike breeki karịa na obere ike ịgbatị, wee nweta mmetụta breeki ka mma.Bu...
Kedu ka ihe nke diski breeki si emetụta arụmọrụ esemokwu?
Na China, ọkọlọtọ ihe maka diski breeki bụ HT250.HT na-anọchi anya igwe nkedo isi awọ na 250 na-anọchi anya ike stensile ya.A sị ka e kwuwe, diski breeki na-akwụsị site na breeki na-atụgharị, na ike a bụ ike nkwụsị.Ọtụtụ ma ọ bụ ihe niile carbon dị na nkedo ígwè dị n'ụdị fl...
Disiki breeki gbawara agbajiri na-arụ ọrụ breeki dị ala?
Nchara nke diski breeki n'ime ụgbọ ala bụ ihe a na-ahụkarị, n'ihi na ihe diski breeki bụ HT250 ọkọlọtọ nkedo isi awọ, nke nwere ike iru ọkwa nke - ike ike ≥206Mpa - ike gbajie≥1000Mpa - Disturbance ≥5.1mm - ike nke 187 ~ 241HBS Diski breeki na-ekpughe ozugbo ...
Ihe kpatara mkpọtụ breeki pad na ụzọ ngwọta
Ma ọ bụ ụgbọ ala ọhụrụ, ma ọ bụ ụgbọ ala a na-ebugharị ruo iri puku kwuru iri puku ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ narị puku kilomita, nsogbu nke mkpọtụ breeki nwere ike ime n'oge ọ bụla, karịsịa ụda "nkuku" dị nkọ bụ nke a na-apụghị ịnagide.Na mgbe mgbe nyochachara, a gwara ya na ...
Nyocha na ngwọta nke enweghị ahaghị nhata nke diski breeki siri ike
Mgbe diski breeki na-agbagharị na oghere ụgbọ ala na oke ọsọ ọsọ, ike centrifugal na-emepụta site na nnukwu diski ahụ enweghị ike ime ka ibe ya dịkwuo mma n'ihi nkesa na-adịghị mma nke diski ahụ, nke na-eme ka vibration na iyi nke diski ahụ dịkwuo elu ma na-ebelata ndụ ọrụ. , ma n'otu oge ahụ, na-ebelata t ...
Kedu ka breeki diski si arụ ọrụ?
breeki diski yiri breeki igwe.Mgbe a na-etinye nrụgide na aka, eriri igwe a na-eme ka akpụkpọ ụkwụ abụọ sie ike megide mgbanaka rim nke igwe kwụ otu ebe, na-akpata esemokwu na mpempe rọba.N'otu aka ahụ, n'ime ụgbọ ala, mgbe etinyere nrụgide na pedal breek, nke a na-amanye mmiri mmiri na-emegharị ...
breeki diski: kedu ka ha si arụ ọrụ?
N'afọ 1917, otu onye na-arụzi ụgbọala chepụtara ụdị breeki ọhụrụ nke a na-arụ n'ụzọ hydrauly.Afọ ole na ole ka nke ahụ gasịrị, ọ kwalitere atụmatụ ya wee webata sistemu breeki hydraulic ọgbara ọhụrụ nke mbụ.Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe niile a pụrụ ịdabere na ya n'ihi nsogbu na usoro mmepụta ihe, a nakweere ya na au ...
Gịnị bụ seramiiki breeki?Kedu uru ọ dị karịa diski breeki ọdịnala?
diski breeki seramiiki abụghị seramiki nkịtị, kama ọ bụ seramiki ihe mejupụtara agbakwunyere nke nwere eriri carbon na silicon carbide na oke okpomọkụ nke ogo 1700.Diski breeki seramiiki nwere ike iguzogide ire ere nke ọma na nke ọma, yana mmetụta nguzogide okpomọkụ ya dị elu karịa nke ahụ ...
Ebee ka a na-emepụta diski breeki na China?
Diski breeki, na okwu dị mfe, bụ efere gburugburu, nke na-atụgharị mgbe ụgbọ ala na-agagharị.Igwe breeki caliper na-amachi diski breeki iji mepụta ike breeki.Mgbe breeki gbagoro, ọ na-amachi diski breeki ka ọ kwụsịlata ma ọ bụ kwụsị.Diski breeki nwere mmetụta breeki dị mma yana ọ dị mfe ijikwa...
Kedu ụdị pad breeki dị mma?
Ọnụọgụ esemokwu kwụsiri ike, ọnụọgụ esemokwu bụ ịtụle isi ihe na-egosi arụmọrụ nke ihe niile esemokwu, nke metụtara ogo breeki.N'oge usoro breeki, ebe ọ bụ na esemokwu ahụ na-ebute okpomọkụ, okpomọkụ na-arụ ọrụ nke onye otu esemokwu na-abawanye ...
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị Ụgbọala akpụkpọ ụkwụ breeki, Pads breeki na-arụ ọrụ, breeki drum volvo, diski breeki, ford breeki diski, mpe mpe akwa breeki akpaaka,